Myanmar Former Famous Actress, Nandar Hlaing's Family | Myanmar Celebrity Couple Photos
Myanmar Former Famous Actress, Nandar Hlaing's Family
Zay Thiha, Nandar Hlaing and their two daughters, Zay Wati Hlaing and Zay Yati Hlaing on April, 2011
နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ ဒုတိယသမီးလေး ဇေရတီလှိုင်ကို ဧပြီလ (၁၉) ရက်နေ့က SCC အထူးကုဆေးခန်းမှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ နန္ဒာလှိုင် နဲ့ ဇေသီဟ တို့ဟာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလက လက်ထပ်ခဲ့ကြပြီး အခုဆိုရင် ဇေ၀တီလှိုင် နဲ့ ဇေရတီလှိုင် ဆိုတဲ့ သမီးငယ်လေး နှစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါပြီ။
Myanmar former popular actress, Nandar Hlaing gave birth her second daughter, “Zay Yati Hlaing”, on 19 April 2011 at SSC Speical Clinic, Yangon. Nandar Hlaing and Zay Thiha got married on May 2008. Now, They are having happy family life with two lovely daughters, Zay Wati Hlaing and Zay Yati Hlaing.
ei eiApril 24, 2011 at 11:46 AMသမီးကြီးကအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ.သားလေးတစ်ယောက်လောက်ထပ်မွေးပါ သားလေးမွေးရင် ကိုဝေ့ နာမည်ပါအောင်ပေးပေးပါ နော်သားလေးမွေးရင်ကိုယ့်နာမည်ပေးပါ မနနာReplyDeletesweetApril 24, 2011 at 5:38 PMနောက်တခါသားလေးမွေးဦးမယ်ဆိုပဲပျော်ရွှင်စရာမိသားစုလေးထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။ReplyDeletemyatMay 5, 2011 at 11:37 PMအစ်မ တို့မိသားစုလေး ထာဝရအမြဲတမ်းပျော်ရွင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်....ReplyDeletehlsingusa1January 12, 2012 at 1:08 PMbaby is so cute and luckyReplyDeletebanana julyJanuary 20, 2012 at 12:48 PMမနန္ဒာ အမြဲပျော်ရွှင်ပါစေ...ReplyDeletejpyaepyaeJuly 5, 2012 at 6:32 AMမိသားစုဘဝကိုပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။jpyaepyaeReplyDeletecho marDecember 17, 2012 at 11:07 PMအမြဲကျန်းမာပါစေReplyDeleteAdd commentLoad more...